१४ असोज, गुल्मी । गुल्मीमा दशै, तिहार पर्वका बेला यात्रुहरुलाई सुरक्षित यात्राको व्यावस्था मिलाउन नागरिक सहायता कक्षको स्थापना गरिएको छ । रिडी बसपार्क, बुढाथोकी बसपार्क र उदिनढुङ्गन बसपार्क गरी तीन स्थानमा नागरिक सहायता कक्षकोे स्थापना गरिएको हो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मी र जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय गुल्मीले नागरिक सहायता कक्षको स्थापना गरेका हुन् ।
त्रिवि पदाधिकारीले गरे चिकित्सा शिक्षा विधेयकको चर्को विरोध
१४ असोज, काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरुले संसदीय समितिमा विचाराधीन चिकित्सा शिक्षा विधेयकको चर्को विरोध गरेका छन् । उनीहरुले डा. गोविन्द केसीमाथि ‘गुण्डागर्दी’ गरेको गम्भीर आरोपसमेत लगाएका छन् । शिक्षा तथा तथा स्वास्थ्य समितिद्वारा गठित उपसमितिले आइतबार गरेको विधेयकबारे छलफल गर्न सरोकारबालाहरुलाई बोलाएको थियो । बैठकमा त्रिवि उपकुलपति तीर्थराज खनियाँ, रजिष्टार डिल्लीराम उप्रेती र शिक्षाध्यक्ष
वीरगञ्ज चकमन्न, रक्सौललाई लाग्यो दशैं
१४ असोज, वीरगञ्ज । दशैं नजिकिँदै गर्दा नेपालको व्यापारिक केन्द्र भनिने वीरगञ्जलाई सीमापारीको रक्सौल बजारले गिज्याइरहेको भान हुन्छ । वीरगञ्ज बजार ग्राहक नपाएर झोक्राइरहेको बेला रक्सौलमा भने दशैंको किनमेल गर्न नेपालीहरुको भीड लागेको छ । स्थानीय व्यापारीहरुका अनुसार रक्सौल बजारमा ८० प्रतिशत ग्राहक नेपाली हुन्छन् । चाडबाडको बेला त झन् त्यहाँ किनमेल गर्न जाने नेपालीहरुको
यी हुन् रगत सफा गर्ने घरेलु उपायहरू
हामीले सँधै स्वस्थ हुन चाँहदा चाहँदै हाम्रो वरिपरिको वातावरणबाट शरीरमा विषालु तत्वले प्रवेश गरिहाल्छन् । बिभिन्न माध्यमबाट प्रवेश गरेका त्यस्ता तत्वहरु रक्त प्रणालीमा पुग्छन् । रगतमा पुगेका खतरनाक तत्वलाई छानेर पिसाबबाट बाहिर निकाल्ने काम मिर्गौलाको हो । तर सँधै अधिक मात्रामा विषालु तत्व छान्नु पर्दा मिर्गौलामाथि धेरै नै दबाब बढ्छ । त्यस कारण सम्वेदनशिल मानिएको
यस्ता खानेकुरा एकै साथ खाएमा स्वास्थ्यलाई हुन्छ ठुलो हानी
हामी दैनिक विभिन्न खालका खानेकुराहरु खाने गर्छौं । गर्मी सुरु भएसंगै शरीरलाई चिसो ब्नौअनको लागी खानाको माग झन् बढ्ने गर्छ । यस समयमा मानिसलाई फुड पोइजन हुने स्मभावाना बादी हुने गर्छ । खानामा तालमेल नमिल्दा यो समस्या आउने गर्छ । हामीले खाने विभिन्न खानेकुराहरु एक आपसमा मिलेनन् भने हामीलाई फुड पोइजनको समस्याले सताउने गर्छ ।
समाचार राजनीति प्रदेश मनोरञ्जन स्वास्थ्य शिक्षा ज्योतिष खेलकुद विज्ञान यौन स्वास्थ्य अर्थ प्रवास भिडियो रोचक मोटोपन घटाउने तथा किड्नी सफा गर्ने घरेलु जुस
हामीमध्ये कसैलाई पनि अनावश्यकरुपमा मोटाउनु राम्रो लाग्देन । त्यसो त, मोटोपन रोग लुकाउने पर्दा समेत हो । हामी मोटोपनबाट मुक्त हुन विभिन्न अभ्यास गर्दछौं । तर यो कहाँ सजिलो छ र ? तर यहाँ तपाईको लागि एउटा यस्तो चामत्कारिक विधि छ, जुन घरमै उपलब्ध हुने सामग्रीबाट तयार बनाउन सकिन्छ । यस्तो घरेलु उपचार पद्धतिले शरीरमा
के तपाइलाई चट्पट त मन पर्छ ? तर होशियार ! चट्पटमा भेटियो खतरनाक एसिड |
अधिकांश चटपट पसलले सर्वसाधारणको स्वास्थ्यमाथि नराम्रो ढङ्गले खेलबाड गरिरहेको पाइएको छ । चटपटेमा कागतीको अमिलोको सट्टा मिसाइने भेनेगर नामक अमिलोले चटपटे खानेहरुमा गम्भीर समस्या निम्त्याइरहेको छ । बिहानदेखि बेलुकैसम्म चटपटको अगाडि साना नानीदेखि युवायुवतीको लर्को लाग्छ । चटपटले हाम्रो स्वास्थ्यमा नराम्रो असर पु¥याइरहेको छ ।भेनेगरको अमिलोका कारण आन्द्रामा घाउ हुन थालेपछि यसको असरबारे सर्वत्र चर्चा
मकै कतिको खानु हुन्छ ? यी हुन् मकै खानुका फाइदा
काठमडौँ । मकैबाट बिभिन्न परिकार, तेल, इन्धन, चीनी, रक्सी आदि बनाउने गरिन्छ । धेरै मानिसहरुले उसिनिएका मकै वा पोलिएका मकै खान मन पराउंछन् धेरै मानिसहरुले उसिनिएका मकै वा पोलिएका मकै खान मन पराउंछन् । यस किसिमका मकै खाएमा स्वास्थ्यका लागि के के फाइदा हुन्छ । मकैमा प्रशस्त्र पोषण तत्व हुन्छ । मकै खाएर मानिसका अनुहारमा
तुलसी सेवनको चमत्कारिक फाइदा, के तपाइलाई थाहा छ ?
काठमाडौं । हिन्दु धर्मावलम्बीहरुको प्राय: घरमा तुलसीको मठ हुन्छ । तुलसी धार्मिक दृष्टिले पनि निकै महत्वपूर्ण मानिन्छ । यसको पूजा पनि गरिन्छ । धार्मिक काममा प्रयोग हुने तुलसी मानव स्वास्थ्यका लागि लाभकारी हुन्छ । तुलसीमा औषधिको गुण हुन्छ । दिनहुँ तुलसीको पात सेवन गरेमा केही बिरामीबाट बच्न सकिन्छ । तुलसीका फाइदाहरु : तुलसी सेवनले निमोनिया
चुरोटभन्दा बढी हानिकारक हुन्छ अगरबत्तीको धूवाँ l सावधानी अपनाउनुहोस
काठमाडौं / पूजापाठ तथा धार्मिक कार्यहरूमा अगरबत्तीको प्रयोग गरिन्छ । अगरबत्तीलाई आध्यात्मिकता मात्र नभई शान्ति र शुद्धताको प्रतीक पनि मानिन्छ । अगरबत्तीको सुगन्ध तपाईंलाई राम्रो लाग्न सक्छ र त्यसले तपाईंको मनलाई आनन्द दिन सक्छ । तर वास्तवमा अगरबत्तीको धूँवा त चुरोटको धूँवाभन्दा खतरनाक हुन्छ । चिनियाँहरूले गरेको अध्ययनमा अगरबत्ती बाल्दा त्यसको धूँवासँगै मसिना कणहरू निस्केर